Soomaaliya iyo Qarniga 21-aad: Ma mabda’ Qarannimo (Nationalism) mise Islaam ayaa lagu Hogaamin karaa?
Soomaalidu waxay qayb ka ahayd meelihii ugu darnaa ee caalamka ee lagu fidiyay mabaadii’da kala duwan, iyadoo ay guumaysteen markii hore waddamo kala duwan oo xambaarsan mabaadii’ kala duwan sida: Fascim, oo maamulkii Talyaanigu aaminsanaa waqtigii uu Soomaaliya ka talinayay ka hor Dagaalkii Labaad ee Dunida iyo kaddib xorriyadii halkaas oo xisbigii Socialism ee Talyaaniga uu Soomaaliya lugta kula jiray. Sidoo kale, Ingiriiska oo isaguna guumaystay Soomaaliya, halkaasoo waqtigii guumaysiga ay Ingiriiska xukumayeen xisbayadii Liberalism iyo Conservatism; kaddib xoriyaddii Soomaaliyana waxaa awoodda Ingiriiska isku bad-badalayay Xisbiyada Conservatism iyo Socialism (ama Labour looga yaqaan Ingiriiska). Sidoo kale, Faransiiska ayaa ka mid ahaa waddamadii ka qayb qaatay qaybsashadii Soomaaliya, halkaasoo waqtigii guumaysiga ay awoodda faransiiska hayeen xisbiyadii Nationalism iyo Socialism.
Ujeedada maqaalkani waxay tahay inaan falanqayno waxa Mabda’a Qarannimo (Nationalism) yahay, Saamayntiisa qaab fikirkeena iyo inuu xal u yahay hogaaminta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Erayga Nation wuxuu ka soo jeedaa laatiin waana nasci oo macihiisu yahay dhalasho. Mabda’ani wuxuu aad u caan baxay waqtigii kacaankii Faransiiska. Ka hor waqtigaas waxaa caalamka laysku xulufaysan jiray ama lagu dagaalami jiray qaab Mabda’a ku dhisan ama boqortooyo ku salaysan. Mabda’a qarannimo waxaa isku waddan loo aqoonsaday dad isku dhalasho ah. Qarnigii 19-naad Mabda’ani si dhaqso ah ayuu ugu fiday caalamka, iyadoo isbedel wayn ku dhacay qariiradii yurub iyo guud ahaan maabka caalamka. Waxaa dumay maamulladii caalamka ka jiray ee ka dhexeeyay dad kala dhalasho duwan sida maamulkii Islaamka ee xaruntiisu ahayd Turkiga, iyo kuwii kale ee laga xukumay Austriya iyo Ruushka.
Qarnigii sagaal iyo tobnaad wuxuu ahaa mid caalamka looga mashquulsanaa dhisidda Qaran. Mabda’ani wuxuu noqday mid aad u caan baxa iyadoo la samaystay calamo, astaan qaran, gabayo iyo qoraalo wadani ah, xusas iyo maalmo fasax ee qarannimo. Fikraddani waxay abuurtay inuu qaran waliba ka sarreeyo kan kale, iyadoo arrintan ay caawisay fididii guumaysiga ee intii u dhaxaysay 1870-naadkii ilaa 1880-naadkii, taasoo dhammaadkii qarnigii 19-naad ka dhigtay in shucuubta caalamka oo idil ay hoos yimaadaan awooddii Yurub. Waxay kale oo keentay in la isku xulufaysto si caalami ah, iyadoo ay ka dhasheen dagaallo waawayn.
Nidaamkii guumaysiga ee ku salaysnaa qarannimo wuxuu keenay in dadkii Islaamka ee qaaradaha Afrika iyo Aasiya loo qaybiyo qaab dhalasho, loona sameeyo xuduudyo lagana qabsaday xagga fikirka dhaqaale, siyaasad iyo bulsho, iyadoo loo soo gudbiyay mabaadii’da reer galbeedka ee kor ku xusan ayna ku jirto mabda’a Qarannimo. Isla mabda’an ayay ku dagaal galeen inta badan dhaqdhaqaaqyadii xornimodoonka guumaysi-diidka ahaa. Kaddib 1945-kii waxaa ku dhacay maababka iyo qariiradda caalamka, gaar ahaan Afrika iyo Aasiya isbedel ay sameeyeen Ingiriiska, Faransiiska, Dhajka (Dutch), Boortuqiiska iyo waddamadii kale ee wax guumaystay ee Yurub, iyagoo u kala qaybiyay qaab dhalasho, balse waddamo badan xitaa kuwii isla dhashay u sii qaybiyay dhawr qaybood, sida Soomaaliya oo shan qaybood loo qaybiyay. Haddaba, arrimahan qaybinta ee lagu sameeyay caalamkii u badnaa Muslimiinta waxay keentay in dagaalo ka dhammaan waayaan, sida Bariga Dhexe, Indiya iyo Pakistaan, Sirilaanka, Soomaaliya iyo Itoobiya, Balkaniska (Yuguslaafiyadii hore) iwm.
Haddii aan eegno Soomaaliya, Mabda’a Qarannimo waa uu sii dhimanayaa maadaama mar kale muddo ku dhow 20 sano la isugu iman waayay in lagu midoobo. Sababtuna waxaa weeye dhalashadii uu ku salaysnaa ayaa lagu sii kala tagay oo si xun loo sii qaybiyay. Taasina waxay keentay in waddamadii keenay mabda’an ay maanta Itoobiya u wakiisheen inay Soomaaliya siday doonto ka yeesho.
Su’aashu waxay tahay haddaba, Ma qaab Qarannimo (Nationalism) ayaa xorriyad lagu raadiyaa mise qaab Islaam?
Maanta caalamku wuxuu u jihaystay qaab ka sii khatar badan midkii hore, kaasoo ah Globalization. Waxaa caalamka lagu maamulayaa qaab caalami ah iyadoo laga doonayo waddan kasta inuu fuliyo wixii ay soo go’aamiyaan USA, Qaramada Midoobay (UN), Midowga Europe (EU), Ganacsiga Adduunka (WTO), Lacagta Adduunka (IMF), Bankiga Adduunka (WB), iyadoo go’aanno yar ay gacanta ugu jiraan waddan kasta. Xagga Bulshada waxaa wada saameeyay Internet-ka, Kubbada cagta (Football), Teleefishan Satallite ah, cuntooyin isku mid ah, iwm. Waa sidii hal Tuulo oo kale.
Waxaa cad haddaba in is xulufaysiga reer galbeedka iyo inta ay mabda’a wadaagaan ee kale sida Itoobiya ay tahay mid sidii qaab Tuulo ah oo haddii mid wax la yeelo ay isu gurmanayaan, kuwa kale ee caalamka Islaamkana lagu hayo qaab-fikirkii hore ee lagu kala qaybiyay. Saas darteed waxaan ku gababaynayaa in Soomaaliya nidaamka kaliya ee ay xorriyad ku raadin karto, maamulna ku samaysan karto uu yahay mid Islaami ah, kaasi oo looga dambaynayo culimada aqoonta sare iyo Allaah ka cabsiga lagu yaqaan, hogaamiye-yaasha dhaqan ee toosan, lana raacayo mabda’a dhexe ee maslaxadda Ummadda.
Sidaas darteed mar haddii ay muuqato halka wadadu tahay waa qardo-jeex in firqooyin diini ah oo fara badan la isku sii qaybiyo, qabiilkiina isa sii qaybiyo. Waxaasi oo dhan waxay kala dhantaal ku yihiin awoodda kooban ee dhaqaale, milateri, iyo siyaasadeed ee Bulshada Soomaaliyeed.
Gabagabo: Mabaadii’da caalamka ka jira maanta waxaa hogaanka u haya reer galbeedka, marka laga reebo mabda’a Islaam. Iyadoo taasi jirto ayaa haddana caalamku wuxuu ku jiraa tartan dhaqaale oo xooggan, kaasi oo maanta u dhexeeya Reer Galbeedka Iyo Shiinaha. Goobaha Dhaqaalaha (shidaalka iyo macdanahada kale) iyo Istiraatijayadda ugu fiican ee maanta labadaas qaybood ku tartamayaan waa dhulalka caalamka Islaamka ay liiska ugu horeeya ku jirto Soomaaliya. Haddaba, Labada qaybood ee tartamaya waxay ku dadaalayaan inaysan si toos ah milateri ahaan isugu dhicin balse laga kala dhabar dagaalamo dadyowga dhulalkooda la isku haysto. Waxaa jira waddamo yar-yar oo uga faa’iidaysanaya fursaddaas in mid ka mid ah labada qaybood ay gacan saar la yeeshaan si ay u gaaraan damac ay wax badan ku taamayeen sida Itoobiya oo wakiil uga noqotay Maraykanka inay Soomaaliya qabsato, Indiya oo qalqaalo ugu jirta in Pakistaan loo wakiisho, iwm.
Sidaas darteed waxaa hoggaamin kara Soomaaliya hoggaan ka saari kara dhibaatada jirta, mideeya ummadda, fahamsan waaqica caalamku marayo, yaqaan sida arrimuhu u kala horreeyaan, xannaaneeya maatada, ah mid mabda’ hago balse aysan maslaxad shaqsi, koox iyo qabiil midna hagin, isla markaana ka gudbin kara caalamkan ay shirkadahu ku tartamayaan.